Muxuu Mukhtaar Roobow kaga duwan yahay Sheekh Shariif iyo Axmed Madobe? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
October 5, 2018 | Filed under: MAQAALLADA | Posted by: Saalax Sabriye
Wasaaradda amniga gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka joojisay inuu xilka Madaxtinimo ee maamul Goboleedka Koofur Galbeed isu soo sharraxo, Sheekh Mukhtaar Rooboow Cali (Abuu-Mansuur), markii uu Shalay ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka Madaxweyne-nimo ee K/G Soomaaliya.
Roobow Abuu Mansuur ayaa August 13, 2017 isku soo dhiibay Dowladda Federaalka Soomaaliya, sidoo kalana waqtigaas ka hor ayey Dowladda Mayrekanka ka saartay Liisk Argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu Roobow dalbaday cafis isla markaasna uu aqbalay inuu Dowladda isku soo dhiibo, sidoo kalana waxay dowladda ballan qaaday Amaankiisa oo ay u wakiilatay Maamulka Koonfur Galbeed.
Haddaba Su’aasha is waydiinta mudan ayaa ah maxay tahay Sababta kaliya loo ugaarsanayo Roobow looguna diidan yahay inuu isku soo sharaxo Maamulka Koonfur Galbeed maadaama ay jiraan xubno ka tirsanaa Shabaab haddana ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xubnaha Shabaab horey uga tirsanaa iyo midowgii Maxkamadaha ee haddana kamid ah Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa kamid ah:
Inkastoo Markii Shabaab soo baxayeen uusan ururkaas ka tirsaneyn haddana wuxuu ahaa sanadkii 2004-2006 Hoggaamiyihii Maxkamadihii Islaamiga ahaa ee ka hirgalay Muqdisho iyo Bartamaha Soomaaliya, wuxuuna mar galay Liiska Agrgixisada iyadoo markii damabana laga saaray Liiskaas sidaasna uu ku noqday Madaxweynaha Soomaaliya .
Shiikh Shariif ma jirin cid ka hor istaagtay inuu u tartamo xilka Madaxweynimo ee Soomaaliya maadaama uu maxkamadihii ka tirsanaa kana mid ahaa dadka uu Mareykanka doon doonayey iyadoo weliba uu madaxweyne noqday xilli ay Shabaab xoog ku lahaayeen Muqdisho iyo Bartamaha Soomaaliya.
Axmed Maxamed Islaam waxaa uu ku soo caan baxay Xiligii Maxaakiimta Islaamiga 2005/2006-dii, Madoobe waxaa uu ahaa Guddoomiyaha Maamulka Gobolada Jubbooyinka, waxaa sidoo kale la shaqeyn jiray Afhayeenka maxkamadaha Jubbooyinka sheekh Ibraahin Shukri iyo Sheekh Ismaaciil Caraale.
Markii Maxakiimtii laga saaray Kismaayo, Waxaa uu saldhig ka dhigtay Xadka Soomaaliya iyo Kenya, isagoo halkaas la joogay garab hubeysan oo lagu magacaabi jiray Raas Kambooni, Axmed waxaa uu ahaa Guddoomiyaha Raas Kambooni, kooxdan ayaa qeyb ka ahaa ururka Xibsul Islaam.
Axmed Madoobe, waxaa uu dagaal kula jiray xilligaas dowladaha Soomaaliya, Itoobiya, Kenya iyo Xitaa Mareykanka, mid ka mid ah dagaalladaas ayuu ku dhaawacmay kadibna waxaa lagu daweeyay dalka Itoobiya.
Axmed Madoobe waxaa uu sidoo kale la dagaallay Al-shabaab, Sheekh Xasan Turki oo ay xulufo soke ahaayeen waxaa uu taageeray Al-shabaab balse Madoobe ciidamadiisa ayuu kala baxay Kismaayo, isagoo dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah la galay Al-shabaab.
Intii uu socday dagaal-ka Madoobe iyo Al-shabaab, waxba isuma reeban labada dhinac, Al-shabaab waxaa ay ku eedeysay Madoobe in uu Itoobiya garab ka helo, Xisbigii uu ka tirsanaa Madoobe ee Xisbul Islaam waxay ku biireen Al-shabaab, Axmed waxaa uu xulafo la noqday Ahlu-sunna iyo dowladda Soomaaliya.
Muddo markii uu socday dagaalka Madoobe iyo Al-shabaab, waxaa dagaalka soo gashay Kenya iyo Gen. Gaandi oo bishii April 2011 isaga iyo ciidamo uu hogaaminaayo oo garab weyn ka helay Militariga Kenya ay Kismaayo ka qabsadeen Al-Shabaab, kadib dagaal muddo dheer qaatay oo laga soo waday Badda iyo Barriga, Gandi ayaa horkacayey maamul loogu magac daray AZANIA, oo ka talinayey Jubbooyinka 2011-dii ilaa 2013-kii.
Axmed Modoobe, waxaa uu meesha ka saaray AZANIA isagoo dhisay Jubbaland, Maamulka hadda loo yaqaano Jubaland waxaa la dhisay 15-may 2013, kadib 500 oo ergo ah isugu yimaadeen magaalo madaxda Jubada Hoose ee Kismaayo, iyagoo u doortay Axmed Madoobe inuu noqdo Madaxweynaha maamulka Jubbaland.
Madoobe waxaa uu aqoonsi ka helay dowladda Federaalka ee Soomaaliy, Bishii Augusto 2013-ka Dowladda iyo Maamulka Jubaland ee Madoobe ayaa heshiis ku gaaray magaalada Adis Ababa, Waxaa labada wafdi kala hogaaminayey Madoobe oo Jubaland ah iyo Faarax Sheekh C/qadir oo wakiil ka ahaa Dowladda Xasan Sheekh.
Haddaba Axmed Madoobe looma diidin inuu Qabto Maamulka Maamul Goboleed kamid ah Soomaaliya, waxaana wax lala yaabo ah inay Dowladda Maanta is hor istaag ku sameyso Roobow Abuu Mansuur oo la filayo inuu seddexdaas Gobol ka sifeeyo Al-Shabaab.
Zakariye Ismaaciil xirsi:
Zakariye wuxuu Horey usoo noqday Madaxii Amniyaadka Al-Shabaab kuwaas oo nolosha dhaafiyey Kumamaan qof oo Soomaali, markii uu Al-Shabaab kasoo goystay waxaa lagu daray Nabad Sugidda iyadoo ugu dambeyn loo magacaabay Taliyaha qeybta Sirdoonka Hey’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA.
Hay’addaan oo ah meesha laga ilaaliyo Dalka Soomaaliya ayaa lagu aaminay Zakariye oo soo noqday Madaxii Amniyaadka Al-Shabaab, sidoo caqli gal ku tahay in Roobow loo dhiibo Maamulka Koonfur iyadoo weliba la ogyahay inay isaga iyo AL-SHabaab kala go’eyn oo uusan marnaba ku laaban karin.
Jen. Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi)
Koofi Wuxuu ka tirsanaa Ururadii Al-Shabaab iyo Xisbula Islaam, welina ma dhicin inuu dadka soo hor istaago isla markaasna uu ka dalbado cafis, saas oo ay tahay waxaa lagu aaminay Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo ah Meesha laga koontaroolo dadka dalka ka baxayo iyo kuwa soo galayo, mana jirin cid ka hor imaaday in xilkaas loo magacaabo maadaama uu sheegay inuu kasoo goystay Al-Shabaab.
Waxaan ugu dambeyn anigoo ah qoraalka Warbixintaa Dowladda Soomaaliya kula dardaarmi lahaa inay Roobow u ogolaato musharaxnimadiisa Koonfur Galbeed, maadaama aan anig ahaan u arko inuu yahay nin u qalmo xilkaas isla markaasna dadka Koonfur Galbeed u horseedi karo Nabad iyo in dhulalka maamulkaas laga sifeeyo Ururka Al-Shabaab oo ah caqabadda koowaad ee hortaagan Dowlanimada Soomaaliya.
Roobow ayaa leh xirfad ciidan, mid maamul iyo inuu karti uu dadka Koonfur Galbeed uga dhaadhacsiin karo inay deegaanadooda ka horeeyaan Ururka Al-Shabaab ee Nolosha iyo horumarka u diidan.
W/qoray: Ibraahim Cali Yarow